NATOKANA HOAN'NY ISRAELIANA IRERY NY DIDY FOLO (LALÀN'I MOSHÈ), FA TSY NATAO HOAN'NY HAFA FIRENENA. - Dinika forum.serasera.org
NATOKANA HOAN'NY ISRAELIANA IRERY NY DIDY FOLO (LALÀN'I MOSHÈ), FA TSY NATAO HOAN'NY HAFA FIRENENA.
Fitohizan'ny hafatra : Re: NATOKANA HOAN'NY ISRAELIANA IRERY NY DIDY FOLO (LALÀN'I MOSHÈ), FA TSY NATAO HOAN'NY HAFA FIRENENA.
Pejy: Voalohany < 7 8 9
stahtam - 15/06/2017 14:12
1°) "ISAIA,56:6-7: izay hafa firenena TE (tsy nisy niteny azy hoe tsy maintsy mitandrina, fa sitrapony ny azy) hitandrina didy folo dia tsy maintsy mankany Israel, dia manao fanatitra sy sorona any"
Valiny: Izany hoe izay tian'ny olona izany no ataony? Izay TE-hitandrina dia mahazo mitandrina? Nefa toa hoe "tsy mahazo mitandrina"? Tsy hita intsony izay marina fa dia roritina @ izay mahamety azy sisa e!
2°) "Ary fantatra koa fa tsy hahavita an'izany ny hafa firenena, dia normal be ra roahina":
(NEHEMIA,13:3 DEO,7:1,3 SAL,147:19,20)
Raha vakiana tsara ny Isaia 42/7 dia hoe hatao trano fivavahana ho an'ny FIRENENA REHETRA ilay tranony. Ka iza no handroaka?
3°) Lasa mandeha any ianao ry stahtam, fa tsy misy idiranao sy ny hafa firenena izany.
Valiny: sao dia ilay adi-hevitra kosa no efa miakatra any @ zanak'atidohanareo dia tsy zakanareo intsony? Ka raha vao misy lainga mivoaka ange eo dia avy foana aho e!
4°) "Tena tsy misy fantatrao tokoa ny testameta taloha matoa toherinao daol koa ny teny ao (ohatra: DEO,30:11-13, DEO,4:1,2, NEH,13:3 SAL,147:19,20 ISAIA,56:6-7, ....)"
- Ary ny Eks 12/12 toa tsy mba voatanisanao?
5°) "Ka ny testameta vaovao dia fahatanterahan'ny tenin'ny mpaminany any @ testameta taloha, fa tsy hoe hanazava ny testameta taloha izay tsy azonao fotsiny akory"
- Ka fahatanterahan'ny tenin'ny mpaminany iza àry ny Matio 2/23 e? (Testamenta vaovao io)
6°) "Atrany aloha ianao dia efa diso; fa manohitra ny tenin'i Moshè sy ny mpaminany any @ testameta taloha, normal be ianao mitsipaka ny fahatanterahan'ny tenin'ny mpaminany aty @ testameta vaovao. Mitsipaka ny testameta vaovao ianao, satria fahavalon'ny mpaminany tary @ testameta taloha"
Porofo matotra resahina fa tsy tora-po manidintsidina toa izao e!
RA TAN - 16/06/2017 10:30
stahtam - 16/06/2017 13:41
Ary ilay fanontaniana 1,2,4,5 toa tsy sahinao novaliana?
RA TAN - 19/06/2017 12:07
stahtam - 19/06/2017 14:43
Aleo ampiana kely ihany fa hatambatra rehefa @ farany:
1°) "Fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe fa maninona raha vao niteny an’io Anarana marina YAH io ny ambasadaoran’i Yahoshuah t@ 2009 dia tonga dia niaiky ny fahamarinany ianao"
Valiny: Ny mahamarina an'io dia noho izy VOASORATRA ao anaty BAIBOLY HEBREO. Ka tsy izay malama vava mpamadika palitao évangélique aty @ 2009 no hilaza amiko fa marina io. Redivin-gadra ny anao.
2°) Ary maninona raha vao niteny an’io Anarana YAH io koa aho t@ herintaona dia maninona koa ianao raha niaiky avy hatrany? Fa maninona ianao no herintaona aty aoriana vao miaiky?
Valiny: raha manaraka ny logique ampiasainao dia tahaka ny hoe vao t@ herintaona izany vao hita(nareo) io anarana io. Dia hatr@ 1996-2009 izany dia nivavaka t@ inona ianareo? Ny fiangonanareo aza t@ izany dia hoe Jesosy Fanekena Vaovao. Izao no nolazaiko hatr@ izay fa sokiro tsara ny taimaso mbola tavelavela any: mbola misy anarana hafa ankoàtra io Yah io ny anarany @ hebreo. Saingy io moa no mba hitanareo dia savitsavihana sy ipasopasohana mason-daomy tsy misy farany eto (ny nampalahelo dia lasa vorona azon'adala no niafaràny)!
3°) Ary rehefa niaiky ianao fa marina ny anay(YAH) dia diso izany ny anao mazava ho azy, ka aza miseho be vava intsony.
- Raha efa nisy hatr@ andron'ny mpanao salamo ny fiangonanareo dia anareo marina io. Ny mpanao salamo mantsy no nametraka an'io tao anaty baiboly hebreo. Izay nametraka azy tao no tompony. Fa raha izay secte vao miforona aty @ 1996 no ho be vava @ izany dia izay ilay hoe mamo miantso polisy na gisalahy mangala-ketsa, ka izy mangalatra indray no avo vava.
RA TAN - 22/06/2017 09:53
-Ny Yahavah, na Yahwah na Yahoshuah dia Anarana NAPETRAKAO, ny Andriamanitra dia NAPETRAKY ny mpandika teny (iray karazana aminao); noho izany fahavalon’i Elohym?
-Ny anarana YAH kosa dia anarana TSY NAPETRAKAO fa efa NIPETRAKA ELA HATRY NY FAHAGOLA tao anaty baiboly nisaraka t@ hoe: Elôhym.
YAH sy ELOHYM dia anarana MIARAKA voasoratra ao anaty baiboly hebreo hatry ny elabe (hatr@ andron-dry Davida sy ny hafa …).
Averiko mihintsy aloha ilay teninao t@ herintaona:hoy i stahtam t@ 10/11/2016 10:04 hoe: “na inona na inona Anarana apetrakao eo dia fahavalon’i Elohym satria ny hoe Elohym dia nolazainao fa tsy misy dikany”. Tsindriako tsara fa “anarana apetrakao EO” (hoy I stahtam): izany hoe ANARANA APETRAK’IZAHO RA TAN “ETO @ ITY FORUM SERASERA.ORG ITY no tiany ho tenenina (fa tsy hoe anarana apetrako ao anaty baiboly); izaho tsy nametraka anarana tao @ baiboly, fa mampiseho an’ilay anarana mipetraka ao anaty baiboly eto @ forum no nataoko. Dia izaho RA TAN no nametraka an’ilay anarana “YAH” izay anaran’Ilay Dadanay izay nahary ny lanitra sy ny tany teto @ forum teto. Ary tsy afaka manda an’izany ianao fa izaho RA TAN no nametraka an’io anarana YAH io teto.
hoy aho hoe: YAH no namorona ny zava-drehetra.
YAH HAVAH: YAH(nom propre) HAVAH(efa nisy hatrizay hatrizay); ka tsy maintsy hoe izay efa nisy hatrizay hatrizay no mpamorona. Ary ianao aza efa niaiky fa YAH no namorona ny tany sy ny lanitra.
Fa izaho tsy niteny an’io Yahavah nolazain’i stahtam io, fa “Yahvah” hoy aho.
Fa izaho tsy niteny hoe izaho no nametraka an’io tao anaty baiboly hebreo. Fa i stahtam mahatsiaro tena afatotr’io teniny t@ heritaona i dia menatra be, dia io mamily resaka io indray.
Ary ny hoe ELOHYM, DIEU, GOD, A/TRA … koa TSY NOM PROPRE fa titre fotsiny.
Raha izaho no miteny an’i stahtam dia tahaka ny hoe fankahalana daholo angamba izay teneniko aminy. Fa I stahtam mihintsy izao no milaza fa DEVOLY ilay ELOHYM ivavahany t@ alalan’io teniny t@ 10/11/2016 10:04 io. Ary hita taratra tokoa izany t@ ireny fitsipahana baiboly ataon’I stahtam ireny.
Raha efa nisy hatr@ andron’ny Mpanao salamo ny fiangonanareo dia anareo marina io. Ny Mpanao salamo mantsy no nametraka an’io tao anaty baiboly hebreo. Izay nametraka azy tao no tompony.
YAH dia Andriamanitr’i Abraham.
Ary niteny Izy hoe “GEN,22:18 amin’NY taranakao no hitahiko ny firenena rehetra”: GAL,3:16 Ary tamin’i Abrahama sy ny taranany no no nilazany ny teny fikasana. Tsy nolazainy hoe: amin’ny taranaka toy ny milaza ny maro; fa toy ny milaza ny anankiray, “ary hoan’NY taranakao dia YAHOSHUAH izany”.
GAL,3:21 Fa fony tsy mbola tonga ny finoana(YAHOSHUAH) dia voambina tao ambanin’ny lalàna isika(Israeliana/jiosy) ka voahidy ho amin’ny finoana izay efa haseho ato aoriana. 24 Koa ny lalàna dia mpitaiza antsika ho amin’i Yahoshuah, mba hohamarinina amin’ny finoana isika. 25 Fa rehefa tonga ny finoana dia tsy fehezin’izay mpitaiza intsony isika(rehefa tonga i YAHOSHUAH dia miala amin’izay ilay torah). 26 Fa ianareo rehetra dia zanak’Andriamanitra amin’ny finoana an’i YAHOSHUAH. 27 Fa na iza na iza ianareo no natao batisa ho amin’i YAHOSHUAH dia mitafy an’i YAHOSHUAH. 28 Tsy misy intsony ny Jiosy na Grika, na andevo na tsy andevo, na lahy sy vavy; fa iray ihany ianareo rehetra ao amin’i YAHOSHUAH. 29 Fa raha an’i YAHOSHUAH ianareo dia taranak’i Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana.
Raha mbola tsy tonga i YAHOSHUAH dia: “izay voambina tao ambanin’ny lalàn’i Moshè no miaraka @ YAH sy Abrahama; izany hoe izay nahatandrina ny torah”. Anisany ry Davida sy ireo Israeliana hafa nahatandrina izany torah izany.
Fa rehefa tonga kosa i YAHOSHUAH dia: nesoriny aminizay ilay lalàn’i Moshè, dia natambany ny Jiosy sy ny hafa firenena dia lasa iray ao aminy daholo. Anisany izahay Malagasy miaraka @ zandrin’i Yahoshuah SAMUELSON EDWARD, ka Ahoana no tsy ho Faly e! OUEEEEEEEEEEEEEEE!!!! Tena mizesita @ izany mihintsy izahay eee! Izany no tena ireharehanay izany aa! Soa fa teo i YAHOSHUAH. Ndao daholo izay hiaraka aminay fa mbola tsy tara
Izay israeliana mbola mitandrina torah dia manamaivana an’i Yahoshuah, ary manohitra an’i Yahoshuah sy ny Ray(YAH). Dia normal hoe: “zanaka devoly nareo”: JAONA,8:37 Fantatro ihany fa taranak’i Abrahama ianareo, nefa mitady hamono Ahy, 39 Raha zanak’i Abrahama ianareo dia ny asan’i Abrahama no ataonareo. 40 Fa ankehitriny ianareo mitady hamono Ahy izay lehilahy milaza ny marina aminareo 44 Ianareo dia avy tamin’ny devoly rainareo, ka izay sitraky ny rainareo no tinareo atao. Izy dia mpamono olona hatramin’ny taloha,
Fa tena novonoin’ireo i YAHOSHUAH; tena ny jiosy mpitandrina didy folo mihintsy izany no nanao sonia hoe zanaka devoly ry zareo, t@ alalan’ny namonoany an’i Yahoshuah. Nefa ilay torah vingitiny misy hoe “aza mamono olona”. Fa tsy nahoany izany satria biby no ao anatiny!
Conclusion, tsy misy Israeliana miaraka @ A/tra YAH izany ankehitriny, fa devoly no miaraka @ ireo. Porofon’izany: ireo mosqué be anankiroa avelan-dry zareo hitsangana eo @ kianjan’ny Tempolin’ny Jerosalema ireo. Iza no miteny anareo hoe azo asiana an’ireo eo?? Ary efa nanao fifanarahana t@ filohan’ny Rosiana koa ny Rabin israeliana sy ny premier ministre israeliana ny @ fananganany ny Tempolin’ny Jerosalema, ka tsy atao olana hoy ry zareo ny fisian’ireo mosqués be an’ny silamo ireo fa avelao hoeo. FANDIKAN-DALANA FARATAMPONY!
Izahay no miaraka @ io YAH izay namorona ny tany sy ny lanitra io ankehitriny, fa tsy ireo israeliana mpandika lalàna ireo. Efa nisy hatrizay hatrizay YAH Dadanay, ary t@ andron’ny Mpanao salamo dia ry Davida no nisolo-tena anay t@ izany; fa ankehitriny kosa izahay no misolo-tena an-dry Davida sy ny namanay t@ izany. Izahay sy ry Abrahama sy ry Davida sns … dia iray ihany, ary samy MIVAVAKA @ YAHOSHUAH daholo izahay rehetra ankehitriny sy mandrakizay.
Misy anaran-tsamirery hafa ankoatra an’io Yah io aza ao anaty baiboly, izay hafa koa ny fampiasana azy, fa tsy hitanareo satria tsy hitan’ny mpandika teny dia voafina.
Izao no nolazaiko hatr@ izay fa sokiro tsara ny taimaso mbola tavela any: mbola misy anarana hafa ankoàtra an’io Yah io ny anarany @ hebreo. Saingy io moa no mba hitanareo dia savitsavihina sy ipasopasohana mason-daomy tsy misy farany eto (ny mampalahelo dia lasa vorona azon’adala no niafaràny).
YAH no anaran’ny Dadanay, dia io irery fa tsy misy hafa izany intsony. Izahay izay heverinareo fa adala sy tsis saina mihintsy inty no nofidiany mba hampamenatra anareo miseho ho hendry sy manana fahalalana ambony. Tena Izy tenany mihintsy no nanatona anay dia niseho taminay ka nampahafantariny anay ny anarany: “ISAIA,65:1Hoy izaho tamin’izay firenena tsy nantsoina tamin’ny anarako: Inty Aho Inty Aho! ISAIA,52:6 koa ny oloko dia hahalala ny anarako; eny amin’izany andro izany dia ho fantany fa Izaho no minteny hoe: Inty Aho”. Tsy ny israeliana intsony io lazaina hoe olony io; satria ny israeliana aza @ fotoana nitenenan’i Isaia efa mahafantatra ny anarany, fa raha lazainao fa israeliana no tenenina eo dia hiteny ry zareo hoe: fa angaha izahay izao tsy efa mahafantatra anao no lazainao fa vao hahafantatra indray? Tsy mety @ israeliana io teny io, fa tena izahay hafa firenena no tenenina amin’io. Sady ny israeliana koa mandika lalàna dia MIAFINA aminy i YAH (ISAIA,59:1,2), dia tsy mety aminy ilay hoe “Inty Aho”.
Tsy mba izahay akory no nitady Azy, fa tena Izy YAH mihintsy no nanatona anay dia noraisinay ampanajana. Ka Ahoana izahay no tsy ho Faly eeee! Ahoana izahay no tsy hirehareha eeee! Fa tena mizesta hatr@ farany mihintsy izahay @ izany a!
stahtam - 31/07/2017 09:17
Ity mbola nisy tavelavela tany:
1°) "YAH no anaran’ny Dadanay, dia io irery fa tsy misy hafa izany intsony"
- Dia hatao aiza indray izany ilay YAHVAH ?
2°) "Izahay izay heverinareo fa adala sy tsis saina mihintsy"
- Ny zavatra soratanareo no ahitana izany fa tsy izahay no nilaza.
3°) "inty no nofidiany mba hampamenatra anareo miseho ho hendry sy manana fahalalana ambony"
- Raha a/tra no nifidy anareo dia tsy mahamenatra anay mihitsy izany. Ianareo aza no tokony ho menatra @ mpitazona ny fomba malagasy satria kolon-tsainy io nangalarinareo io.
4°) "Tena Izy tenany mihintsy no nanatona anay dia niseho taminay"
- Izany an! Hoy ny vazaha hoe: "Cause toujours mon lapin!"
5°) "ka nampahafantariny anay ny anarany: “ISAIA,65:1Hoy izaho tamin’izay firenena tsy nantsoina tamin’ny anarako: Inty Aho Inty Aho! ISAIA,52:6 koa ny oloko dia hahalala ny anarako; eny amin’izany andro izany dia ho fantany fa Izaho no minteny hoe: Inty Aho”. Tsy ny israeliana intsony io lazaina hoe olony io; satria ny israeliana aza @ fotoana nitenenan’i Isaia efa mahafantatra ny anarany, fa raha lazainao fa israeliana no tenenina eo dia hiteny ry zareo hoe: fa angaha izahay izao tsy efa mahafantatra anao no lazainao fa vao hahafantatra indray? Tsy mety @ israeliana io teny io, fa tena izahay hafa firenena no tenenina amin’io"
- Efa voavaly tany aloha ity lelon-jaza ity.
6°) "Sady ny israeliana koa mandika lalàna dia MIAFINA aminy i YAH (ISAIA,59:1,2), dia tsy mety aminy ilay hoe “Inty Aho”
- Dia miafina @ i Paoly koa ve ? Satria i Paoly dia Israeliana! Ka nahoana ianareo no mino azy ?
7°) "Tsy mba izahay akory no nitady Azy, fa tena Izy YAH mihintsy no nanatona anay dia noraisinay ampanajana"
- Hitako i davida kely mvba nahasahy nirotsaka hofidiana ho filoha ko ! mba hahatanteraka ilay "faminaniana tena nomena anareo" Ary tena nanatona anareo izy izany fa ilay vahoaka mpifidy no tsy nahafantatra! (0,98%). Vahoaka mpandiso faminaniana tss! Fa ny fanontaniako izao dia hoe: Faly ve ianareo t@ iny vokatra iny ?
8°) "Ka Ahoana izahay no tsy ho Faly eeee! Ahoana izahay no tsy hirehareha eeee! Fa tena mizesta hatr@ farany mihintsy izahay @ izany a!"
- OK ! OK ! OK ! Merci !
Page rendered in 0.0452 seconds